SAWIRRO: Xiddigaha Liverpool Oo Ka Degay Magaalada Paris Iyo Labada Xiddig Ee Ka Farxiyey Taageereyaasha - GOOL24.NET
SAWIRRO: Xiddigaha Liverpool Oo Ka Degay Magaalada Paris Iyo Labada Xiddig Ee Ka Farxiyey Taageereyaasha
Ciyaartoyda Liverpool ayaa maanta ka degay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska oo ay Sabtida kula ciyaari doonaan Real Madrid finalka Champions League, waxaana jamaahiirta kooxda farxad geliyey muuqaalka laba ciyaartoy oo ay ku dhax arkeen kooxdooda.
Tababare Jurgen Klopp iyo xiddigaha kooxdiisa ayaa safarka galay iyagoo dhamaystiran, waxaana laacibiinta naadiga ee Paris tegay ku jiray labada ciyaartoy ee khadka dhexe ee Thiago Alcantara iyo Fabinho oo dhaawacyo kaga maqnaa kulamadii ugu dambeeyey.
Thiago Alcantara ayaa dhaawac lagaga saaray ciyaartii ugu dambaysay horyaalka Premier League ee Wolves, waxaanu seegay tababarkii ay kooxdiisu iskugu diyaarinaysay finalka Champions League ka hor intii aanay u safrin caasimadda Faransiiska.
SIodo kale, Fabinho ayaa isaguna dhaawac muruqa ah ku seegay saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, waxaase uu isagu ka duwanaa Thiago Alcantara sababtoo ah waxa uu ciyaartoyda kale la qaatay tababarradii ugu dambeeyey, waxaana rajo badan laga qabaa inuu kusoo bilaaban doono.
Klopp oo warbaahinta la hadlay ka hor intii aanay kooxdiisu u duulin Paris ayaa yidhi:”Thiago Alcantara iyo Fabinho way ku jirayaan ciyaartoyda Liverpool ee u safraya Paris ee finalka Champions League la ciyaaraya Real Madrid. Waxay ka mid noqonayaan ciyaartoyda Sabtida tegaysa Stade de France inkasta oo ay jiraan dhaawacyo walaac nagu haya, waxayse u dhow yihiin inay soo laabtaan.”